Yini eyenza ithuluzi elihle elingamagama angu-Amazon elinomsebenzi olinganiselwe ngempela?
Wonke umuntu owaziyo nge-Search Engine Optimization uyazi ukuthi cishe akunakwenzeka ukuba ngumthengisi ophumelelayo ku-intanethi ngaphandle kwe-Amazon ngaphandle kwekhigama elingukhiye okwenza izinto zibe lula kakhulu. Ubani obaluleke kangaka ukuthatha isinqumo esifanele? Kungenxa yokuthi ngokuqinisekile kuzomele uqhubeke nokuqapha amagama akho angukhiye oyinhloko womkhiqizo, hlola izinhlanganisela zokusesha umsila omusha, futhi ubuke amathuba okuwina omkhiqizo ongawafaki kuhlu lwakho kuze kube manje.
Kuthathwe ngokujwayelekile, umgomo oyinhloko woma iyiphi i-keyword ye-Amazon engokhiye oyinhloko ukuthola ukuncintisana okuphansi kwamagama angukhiye we-shopper, phakathi kwenhloso yokuthenga ephakeme kakhulu yokusiza ukuguqula amaklayenti akho angakhona kumthengi wangempela. Kodwa ungakhetha kanjani ukhetho oluzobe lufanelana nezidingo zakho kanye nemigomo yebhizinisi? Yebo, lokho kuncike.
Into ewukuthi umsizi omuhle we-inthanethi uhloselwe ukusiza ukuthi uthole amagama angukhiye afanele kanye nemishwana yokusesha ende ende engayakha umgomo omkhulu womsebenzisi. Ngaleyo ndlela, kulindeleke ukuthi ikupompe ivolumu ephezulu yokusesha - pharmasept tol velvet ��������. Ekugcineni, ukuze kubonakale amadili amakhulu okugcwaliswa ngempumelelo emakethe ye-Amazon, futhi ngokunikeza ukukhanya okuluhlaza ekuthuthukiseni kwakho okungcono ngokuhamba kwesikhathi. Ngokuyisisekelo, zonke izixazululo zokucwaninga ngegama elingukhiye - kungakhathaliseki ukuthi ithuluzi lokucwaninga elingukhiye elilodwa, i-platform yesikhulumi ne-toolkit yendawo yonke, isofthiwe yokulandelela / isofthiwe yokuzenzekelayo, noma isipho esivela ngokuqondile "sokukhiya ukhiye" - kuhloswe ukukunika izinsizakalo nezinzuzo ezilandelayo:
Inani eliphakeme lamagama angukhiye.
ama-metric amavolumu wokusesha ngesikhathi esifanele.
Ukulinganisa okujwayelekile kwe-CPC.
Iziphakamiso zegama elingukhiye elide.
kulinganiswe ngokunembile kwegama elingukhiye lokuncintisana.
Ukuqonda okuncintisana nokulandelela isikhundla.
Leli thuluzi elingukhiye eliyinhloko lamafutha e-Amazon lingakusiza ukuba wenze inani eliphakeme lamagama angukhiye okumelwe awine, nomkhiqizo omude omsila imibuzo yokusesha kuhlu lwakho lomkhiqizo ukuze uhlale uphelelwe isikhathi, futhi ube namathuba angcono okuboniswa eduze naphezulu kokuthengwa kokuthenga ngaphezulu. Phakathi kwamanye, i-SkyRocket ingakusiza ukuthi wenze kalula amagama angukhiye angu-200 ahlobene eduze ne-ASIN ethize, unikeza izincomo eziwusizo kumagama angukhiye abalulekile okumele ahlolisise imikhiqizo yakho ethengiswayo, futhi ikusize ekubeka phambili izinto eziyinhloko ezidingekayo ukuhlunga uhlu lwamathengisi.
Kungenye indlela enhle yokuba ithuluzi lakho elingamagama eliyisihluthulelo se-Amazon, elikwazi ukusebenzisana nawo wonke lawo mazwi angukhiye aphakanyisiwe kanye nawo wonke amahlanganisi okusesha athembisayo ahlobene nomkhiqizo / isigaba sakho. Njengoba i-database yayo ejulile ihlanganisa okuthile okuzungeze amagama angu-40 okusesho okusetshenziselwa abathengi bukhoma ku-Amazon, i-Keyword Inspector iyazi konke mayelana nokwenza amagama angukhiye ephezulu abezingeni eliphikisana nabaphikisi bakho. Futhi ngeke uphinde uthule ngamanani amakhulu noma noma iyiphi iqoqo lezinombolo eziluhlaza - ngisho nohlu lwamagama angukhiye abhekene nawo nezinkulungwane zamazwi ahlukene asesho angaba kalula ispredishithi esinezinombolo eziqukethe idatha ehlelwe kahle futhi ehlelwe kahle. Futhi ungakhohlwa ukuthi ungasebenzisa kahle leli thuluzi elibanzi ukushayela imikhankaso yakho ye-PPC futhi uthuthukise imiphumela yakho yokukhangisa ngezinga eliphakeme.